Youth | Myanma Radio and Television
လူငယ်အစီအစဉ် “ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ရှိ သုတသိပ္ပံ မဟာဌာန၏ Cyber Sec...
လူငယ်အစီအစဉ် “အမျိုးသားဘောလုံးအကယ်ဒမီ(ရန်ကုန်)သင်တန်းကျောင်းအတွက် သင်တ...
လူငယ်အစီအစဉ် “ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ်တွင် နွေရာသီ အားကစားသင်တန်း သင်ကြားပေးန...
ရုပ်သံမှတ်တမ်းအစီအစဉ် “မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့၏ (၇၆) နှစ်မြောက် မြန...
(၃၁)ကြိမ်မြောက် SEA Games အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလှေ (Rowing)နှင့် ကနူး...
Youth May 14, 2022
ပန်းပွတ်ပညာ မတိမ်ကောဖို့ လက်ဆင့်ကမ်းထိန်းသိမ်းသင့်
၂၀၀၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၆)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ရွှေပြည်သာမြို့နယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်...
(၃၁)ကြိမ်မြောက် SEA Games အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလှေ (Rowing)နှင့် ကနူးကယက် လှေလှော်အားကစားသမားများ ပ...
လူငယ်အစီအစဉ် “ဧပြီလ (၁၈ မှ ၂၁)ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Online တိုက်ကွမ်ဒိုပြိုင်ပွဲ ကျ...
Youth May 08, 2022
လူငယ်အစီအစဉ် “အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ နွေရာသီ အားကစားနှင့် ကာယပညာသင်...
ရုပ်သံမှတ်တမ်းအစီအစဉ် “မြန်မာ့လက်မှုအနုပညာစင်တာမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ကိုအောင်ကျော်စိုးနှင့် တွ...
လူငယ်အစီအစဉ် “လူငယ်များ၏ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက် IT နည်းပညာကို သက်မွေးပညာ သင်တန်...
လူငယ်အစီအစဉ် “(၆)ကြိမ်မြောက်အာဆီယံ လူငယ်ဗီဒီယိုပြိုင်ပွဲ (၂၀၂၂)ကျင်းပမည်”
Youth April 30, 2022
လူငယ်အစီအစဉ် “လူငယ်များအတွက် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပေးလျက်ရှိသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမ...
လူငယ်အစီအစဉ် “ရုပ်သံမှတ်တမ်း အင်းလေး မှ ဗေဒါမြေဆွေး၊ သဘာဝမြေဩဇာ ပြုလုပ်နည်းနှင့် ပရဟိတ ကွန်ပျူတာသင်တ...
လူငယ်အစီအစဉ် “နွေရာသီအခမဲ့ ဖူဆယ်အားကစားသင်တန်းဖွင့်လှစ် သင်ကြားလျက်ရှိ”
လူငယ်အစီအစဉ် "EPS စနစ်ဖြင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ မြန်မာလုပ်သားများ ကိုဗစ်- ၁၉ စတုတ္ထလှိုင်...
Youth April 23, 2022
လူငယ်အစီအစဉ် "နွေရာသီ အခမဲ့ဘောလုံးသင်တန်းဖွင့်လှစ်"
လူငယ်အစီအစဉ် "၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် ဘာသာစုံနှင့် ၅ ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ကျေ...
ရုပ်သံမှတ်တမ်းအစီအစဉ် "ဒါရိုက်တာ ကျော်နှင်းဆီနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း "